I-Condo On the Lake yeholide noma ibhizinisi.
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Lee
Leli gumbi lokulala elilodwa lokugeza echibini lilungele izithandani (ukubaleka kwezothando) noma umuntu webhizinisi oyedwa odinga indawo yokuhlala eduze kwedolobha. I-condo ihlotshiswe kahle futhi inethezekile. Uma ujabulela ukuhlala emvelweni phakathi kwezihlahla ezinkulu ze-Oak ezineminyaka engu-100 ubudala, imisindo yemvelo kanye nokubukwa kweChibi, uzothanda ideskithophu Enkulu ngaphandle kwegumbi lokuhlala. I-condo ifakwe ngokuphelele ikhishi eliphelele, nawo wonke ama-aphoyintimenti okugeza negumbi lokulala.
Igumbi lokuphumula libheke umpheme omkhulu obheke echibini,. Kunezihlalo eziningi ezinezambulela zomthunzi kanye netafula elihle lesidlo sasekuseni sasemini noma isidlo sakusihlwa. Ikhishi liwuhlobo lwegalaji futhi livulela kokubili indawo yokudlela encane kanye negumbi lokuhlala elinefenisha emnandi eline-tv engu-55 inch ene-YouTube TV, i-Netflix Hulu nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi. Uma uthanda ukudlala i-chess noma i-Scrabble leyo midlalo iyatholakala futhi. Igumbi lokulala lisezingeni eliphezulu kanye nendlu yokugezela okuwukuphela kwayo etholakala phezulu ezitebhisini zokufika. Igumbi lokulala libheke uDekhi ngokubuka kwechibi futhi linombhede wendlovukazi onethezekile kanye nenye i-tv engu-32 inch yokuzijabulisa.
Ngizotholakala noma nini ukuze ngiphendule imibuzo, noma ngixazulule noma iyiphi inkinga kubavakashi bami. Ngizoba yimizuzu engu-15 kuphela uma ngishayelwa ucingo noma uma isivakashi singithumelela umyalezo.